Ntuziaka gam akporo, ndu ndu maka ndị mbido na usoro mbu | Gam akporosis
Ntuziaka gam akporo, ndu ndu maka ndị mbido
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Nkuzi
Ọ bụrụ na ị chọọ a android akwụkwọ ntuziaka ma chọta ọkwa a, nke mbụ, ịnabata. Have bịarute ebe a maka nhọrọ abụọ. Ma ọ bụ na ị bụ otu n'ime "weirdos" ndị guzogidere inwe Smartphone na ị mechara kpebie imeziwanye, ma ọ bụ ị sitere na sistemụ arụmọrụ ọzọ ma chọọ iwere nzọụkwụ ahụ na gam akporo, sistemụ arụmọrụ sistemụ kacha mma. Ma eleghị anya, ị ka nọ na-achọ oge na-achọ ịmata otu ihe si arụ ọrụ. Ọtụtụ na-ewere nzọụkwụ ahụ, ihe ndị ọzọ n'ihi na ọ dị ha ka ha anaghị adị n'etiti ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’ị bụ otu n’ime ndị mechara kpebie “gabiga hoop” wee zụta ama gam akporo ama gwa gị na ị gaghị akwa ụta. Taa, anyị ga-eso gị nzọụkwụ site na nhazi site na ntọala ntọala gam akporo niile nke mere na ahụmịhe gị nwere afọ ojuju dịka o kwere mee. Anyị ga-anọnyere gị iji duzie gị ma nyere gị aka ime ka ekwentị ọhụrụ gị rụọ ọrụ nke ọma. Ebe obula i si bia, asim, bia na gam akporo.
1 Gịnị bụ gam akporo?
2 Sistemụ megheere mmadụ niile
3 Gịnị bụ customization n'ígwé na gam akporo?
4 Otu esi emepụta akaụntụ Google
5 Ọrụ Google n'efu
5.1 Ọrụ Google maka ọrụ
5.2 Iji hazie gị
5.3 Azịza nye ajụjụ
5.4 Ntụrụndụ na fun
6 Nhazi nhazi nke gam akporo gam akporo gi
6.1 Esi edozi asụsụ gị na gam akporo
6.2 Olee otú ịtọ gị gam akporo ngwaọrụ dị ka a "ngwaọrụ ọhụrụ"
6.3 Họrọ wifi network maka gam akporo ekwentị
6.4 Otu esi abanye na akaụntụ Google anyị.
6.5 Etu esi tinye akaụntụ email ọzọ
6.6 Hazi nche na unkpọghe usoro na gam akporo
7 Etu esi amata ma sistemụ arụmọrụ m nke Android ọ dị ọhụrụ
8 Etu esi ebudata ngwa na gam akporo
9 Etu esi etinye ma ọ bụ wepu ngwa na gam akporo
10 Mkpa ngwa ọdịnala na android
10.1 Netwọk mmekọrịta
10.2 Izi ozi
11 Ngwa bara uru maka ama gị
11.3 n'akpa uwe
12 Gam akporo nche
13 Esi ndabere data m na gam akporo
14 Etu esi ebufee data m na gam akporo site na iPhone
14.1 Google Drive maka iOS
14.2 Foto Google maka iOS
14.3 Bugharịa Ndi ana-akpo Nyefee / Ndabere
15 Are dị njikere ugbu a imikpu onwe gị na ụwa gam akporo
Gịnị bụ gam akporo?
Y’oburu na ohuru n’uwa a nke smartphones, anyi agaghi etinye aka ya na ndoro-ndoro ebighi ebi. Ikwesiri ima nke ahu Gam akporo bu sistemụ mkpanaka Google. Ma gịnị banyere sistemụ maka ekwentị mkpanaaka kachasị iji n'ụwa. Gị ugbu a ọnụ ọgụgụ nke ndị na-adịbeghị anya gwa ndị ọrụ nọ n'ọrụ karịrị ijeri abụọ. Ọnweghị ihe ọ bụla. Taa ọ na - asọmpi ya na sistemụ arụmọrụ Apple, nke karịrị ọnụọgụ abụọ nke ndị ọrụ. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ Spain bụ mba gam akporo ebe ọ bụ na ihe karịrị 92% nke smartphones na mba anyị na-arụ ọrụ n'okpuru sistemu na-acha akwụkwọ ndụ android.
Na 2017 gam akporo O ruola afọ iri kemgbe ọ malitere ya. Na-arụsi ọrụ ike kemgbe 2008 na ngwaọrụ mkpanaka, mbadamba, na n'oge na-adịbeghị anya na wearables. Emepụtara n'okpuru nkwado ego nke Google site na ụlọ ọrụ ngwanrọ "Android Inc.", nke ga-emesị Google nweta ya na 2005. Nna ya a ma ama, Andy Rubin, yana otu ndị ọrụ nhọpụta ahọpụtara chọrọ ịmepụta Linux sistemụ. Nke a bụ otú sistemụ gam akporo si pụta ìhè.
Sistemụ megheere mmadụ niile
The uru na a sistemụ awade n'elu Apple si iOS usoro bụ na ọ bụ ihe na-emeghe usoro. Ọ bụla emeputa nwere ike iji ya na imeghari ya ngwaọrụ ha. Y ọ bụla Mmepụta nwere ike ịmepụta ngwa maka otu ekele a kit na Google awade dị ka a free download. Na nkenke, inwe ike iji ya mee ihe maka ihe echepụtara ya. Sistemụ arụmọrụ maka touchscreen smart ngwaọrụ. N'ụzọ nke a, ụdị ọ bụla nke na-eme Smartphone, ya na ikikere Google, you nwere ike iji gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ. Kedu Apple, dịka ọmụmaatụ, anaghị eme. Ugbu a ọ bụ omume na ọbụna ndị nrụpụtara jiri OS nke ha, dịka BlackBerry dịka ọmụmaatụ, ejirila usoro ụwa zuru ụwa ọnụ.
Gam akporo bu sistemụ arụmọrụ dabere na nhazi ngwa. Ndị isi, nke a na-ewere dị ka isi maka ọrụ ha, ka etinyere sistemụ arụmọrụ n'onwe ya. Sistemụ etinyere n’usoro ihe owuwu ụlọ iji mee ka mmeghari akụrụngwa dị mfe. N'ihi ya, ngwa ọ bụla nwere ike iji ihe akụrụngwa ahụ, onye ọrụ nwere ike dochie ya. Mgbe e mesịrị, anyị ga-ekwu maka ngwa ahụ, ntinye ha ma anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ.
Gịnị bụ customization n'ígwé na gam akporo?
Dị ka anyị kọwara, ihe niile ndị nrụpụta ugbu a na-eji sistemụ Google iji mee ka ngwaọrụ ha dị ndụ. Ma enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị, n'ebumnuche nkeiche ha na ndị ọzọ, jiri usoro a na-akpọ nke ahaziri iche. Ọ ga - abụ, kọwara ya n'ụzọ doro anya, dịka "Ejiji" usoro gam akporo na uwe ndi ozo. Sistemụ arụmọrụ ka dị otu, mana n'ọdịdị ọ dị iche. Ihe onyonyo o gosiri di iche na nke Google kere. Ebe a ogo njikarịcha na-arụ ọrụ dị mkpa enwetara site na ntinye nke oyi akwa na gam akporo.
Enwere ụlọ ọrụ, dịka Sony, na-emetụta nhazi otutu mmegharia ike, na-egbochi ụfọdụ nnabata nhazi na ụfọdụ. Sdị dị ka Xiaomi, nke nsụgharị sistemụ arụmọrụ, nke a na-akpọ MIUI, na-enweta ezigbo nyocha site na ndị ọrụ ya. Ma e nwere ndị ọzọ na-ahọrọ ịnye gam akporo "dị ọcha", dị ọcha na nhazi.
Tọ agba. Ma, anyị na-akwado ihe gam akporo na-enweghị njedebe na enweghị "ngbanwe". Kemgbe ụfọdụ n'ígwé ndị a na-eme ka usoro ihe dị mmiri mmiri na-arụ ọrụ nke ọma na-ata ahụhụ nwayọ nwayọ enweghị isi.
Otu esi emepụta akaụntụ Google
Nwere ike ị gaghị enwe Smartphone gam akporo, mana ọ ga-ekwe omume na ị nwere akaụntụ email "gmail". Ọ bụrụ na inweela ya, nke a ga-abụ njirimara gị iji nwee ike iji ọrụ Google niile. Ọ bụrụ na ịmebebeghị akaụntụ Google gị, ị ga-eme ya tupu ịmalite na nhazi nke ngwaọrụ gị.. Iji mee nke a ị gaghị achọ ihe karịrị nkeji abụọ. Na ntuziaka gam akporo a anyị na-akọwa ihe niile. Usoro ahụ dị ka ịmepụta akaụntụ email n'ihi na ị ga-emekwa nke ahụ. Nanị nsogbu ị nwere ike ịchọta bụ na mmadụ ejirila aha ịchọrọ. Maka ndị ọzọ, gụnyere usoro nke data onwe gị, ị ga-enwe ngwa ngwa nke njirimara Google gị mana ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, lee, anyị na-akọwa nzọụkwụ site nzọụkwụ na ụzọ dị iche iche mepụta google.
Ozugbo amatara gị, ị dị njikere ịnweta ka kasị ukwuu ngwa ahịa e nwere, ihe play Store. N'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike jiri ya na gam akporo ngwaọrụ gị nke ọrụ niile Google na-enye n'efu. Dị ka iwu zuru oke, ha bụ ngwa ndị ahụ niile arụnyerela na ngwaọrụ anyị. Dabere na akara nke ngwaọrụ ahụ, ha nwere ike soro ụfọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ dịka ndị egwu egwu, wdg.
Ọrụ Google n'efu
Google siri ike ime ka ndụ anyị dị mfe. Ma na-enye anyị usoro nke anyi ji enweta ihe nke oma n’elu igwe n'ụzọ kachasị mma. Ha dị ọtụtụ ma dị iche iche na anyị nwere ike ịkọwa ọdịiche site na ngalaba ụdị ọrụ Google na-enye n'efu. Na ntuziaka gam akporo anyị ahọrọla ndị nwere ike ịnye gị ọtụtụ na mbụ.
Ọrụ Google maka ọrụ
Ná nkebi a anyị nwere ike iji
Akwụkwọ Google, a editọ ederede ederede n'ịntanetị nke anyị nwere ike idezi ma kekọrịta akwụkwọ ọ bụla ebe ọ bụla ị nọ.
Ihe ntanetị Google bụ na, akwụkwọ ozi, ma cnwee ike ikesara ya, mee ka ọha na eze dezie otu ma ọ bụ karịa, ma jiri ya ebe ọ bụla.
Ihe ngosi Google, ihe dịkarịrị nso na ihe ị ga - amata dịka "ebe ike". Usoro dị mfe iji mee ma kpọọ ihe ngosi gị.
Google mbanye, ebe "nchekwa" nwere nchekwa iji dowe otu faịlụ gị ọtụtụ akwụkwọ eji, ọbụlagodi data ntinye.
Iji hazie gị
Google na-enye anyị ohere ịhazi ahazi. Ma nwee ọdịnaya dị oke ọnụ ahịa na igwe ekwentị anyị ebe ọ bụla. Yabụ anyị ga-enweta
Foto Google, nke na - abughi naanị ịhazi njide anyị. Na akpaghị aka mee albums site na ụbọchị ma ọ bụ ebe. Na mgbakwunye inye anyị anyị 15 GB nke nchekwa ka foto ghara weghara ohere na ngwaọrụ anyị.
Ndi Ochichi Google eme ka anyi ghara itu egwu igbanwe igwe n’ihi onodu echefuru echefu, ma obu iji aka gi gafere ha. Mekọrịta kọntaktị na gị Google akaụntụ na ha ga-abụ ebe ọ bụla ị mata onwe gị.
Google Kalinda, kalịnda Google ka ị ghara ichefu ihe ọ bụla, na ka edere ihe niile ede. Ihe ngosi, ncheta, mkpu Onweghị ihe ga-agbanahụ gị.
Azịza nye ajụjụ
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ smartphone ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịjụ ya ihe ọ bụla, nri? Inwe Google n'ọbụ aka gị ọ bụ uru. Iji ngwa wijetị Google arụnyere anyị nwere ike ịjụ site na ịgwa Google okwu banyere ihe ọ bụla. Ma ọ bụ chọọ na ịnyagharịa site na ngwa a maara nke ọma nke ihe nchọgharị gị. onye iro
Google Chrome ịchọ na ịnyagharịa site na ngwa a maara nke ọma nke ihe nchọgharị gị
Google Maps. Ma ị chọrọ ịmata ebe ihe dị ma ọ bụ otu esi aga ebe ahụ, nnukwu “G” ga-enyere gị aka ozugbo. Google anaghi ahapu gi ebe obula ino.
Ntụgharị Google, N’ebe ọ bụla ị nọ, asụsụ a agaghị abụkwara gị ihe mgbochi.
Ntụrụndụ na fun
Smartphone bu otutu okwu nkwekorita. Ma ọ bụ otu a, anyị niile enwere onwe anyị oge ụfọdụ oge ichere ogologo. E nwekwara ndị na-eji gam akporo ekwentị ha dị ka ebe ntụrụndụ multimedia ha. Maka nke a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ngwa.
YouTube. Ihe nkiri vidiyo gụgharia site na mma. Gwuo vidio kachasị amasị gị, kekọrịta ha ma ọ bụ bulite nke gị.
Egwu Google Play na-etinye n'aka gị onye ọkpụkpọ mgbasa ozi tozuru etozu n'aka gị. Na mgbakwunye na ịkpọ egwu ahụ site na ngwaọrụ gị, ịnwere ike ịnweta oge kachasị ọhụrụ nke oge ahụ. Ma ọ bụ zụta album kachasị ọhụrụ nke ọkacha mmasị gị kachasị amasị.
Ihe nkiri Google Play Dị ka egwu, nweta ozi kacha ọhụrụ na fim, ihe nkiri onyonyo ma ọ bụ n'usoro.
Ndị a bụ ọrụ ndị kachasị ama, mana Google na-enye gị ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Dị ka ị hụrụ, a ụwa dum nke ohere na gị gam akporo ngwaọrụ. You maara ihe niile ị na-efu? O doro anya na ị naghị akwa ụta na ị zụrụ ama gam akporo. Ma ọ bụrụ na ịzụtabeghị ya, mgbe ị gụchara akwụkwọ a, ị ga-ekwenye.
Nhazi nhazi nke gam akporo gam akporo gi
Alreadyzụla ya? Ekele m. Ọ bụrụ na ị n'ikpeazụ nwere ọhụrụ gị gam akporo ngwaọrụ na aka gị ọ bụ oge iji kwadebe ya. N'ime ntuziaka gam akporo a, anyị ga-eduzi gị nzọụkwụ site na iji mepụta nhazi mbụ. Mgbe i wepụsịrị ekwentị ọhụrụ gị na igbe ya, anyị ga - eme ya tinye anyi kaadi SIM na mbu. Na enweghị egwu, pịa bọtịnụ ike iji malite nhazi.
Esi edozi asụsụ gị na gam akporo
Ọ bụ ihe mbụ anyị ga - eme ma anyị gbanye ngwaọrụ gam akporo ọhụrụ anyị. Mgbe ozi nnabata nke nke ya ji ekele anyị anyị ga-ahọrọrịrị asụsụ anyị ga-eji jiri smartphone anyị na-emekọrịta ihe site n'oge ahụ. N'ime oke asụsụ anyị ga-ahọrọ nke kwesịrị ekwesị, ọ bụ ya.
Ọ bụrụ na oge ọ bụla anyị chọrọ ịgbanwe asụsụ ahọpụtara na nhazi izizi anyị nwere ike ịme ya ọfụma. Anyị agaghị eduzi na menu nke ama anyị «Ntọala». Site ebe a, na-abanye n'ime "Ntọala di elu" anyị kwesịrị ịchọ nhọrọ "nkeonwe". Site na ọnọdụ a, site na ịpị "Asụsụ na ntinye ederede" Anyị nwere ike ịnweta ndepụta asụsụ ma gbanwee ya na nke anyị chọrọ.
Olee otú ịtọ gị gam akporo ngwaọrụ dị ka a "ngwaọrụ ọhụrụ"
Ndị ọhụrụ dị na nsụgharị nke gam akporo na-enye nhọrọ nhazi ohuru maka mgbe anyi weputara ama. Yabụ, ọ bụrụ na ekwentị ọhụrụ ahụ azụrụ na-emegharị nke gara aga, anyị ga-adị mfe. Site na nke a, anyị nwere ike ịhazi ekwentị ọhụrụ ahụ nwere otu nhọrọ dị ka nke ochie. Ọbụna otu ngwa ndị anyị rụnyere, igodo Wi-Fi, wdg.
Mana nke a abụghị ikpe anyị ugbu a. Na ịga n'ihu na nhazi nhazi anyị ga-ahọrọ nhọrọ "Melite dị ka ngwaọrụ ọhụrụ". N'ụzọ dị otú a, a ga-abanye usoro na ntọala ndị a maka oge mbụ. Ya mere, ka anyị gaa nzọụkwụ ọzọ.
Họrọ wifi network maka gam akporo ekwentị
Ọ bụ ezie na nzọụkwụ nke ịhọrọ netwọk Wi-Fi achọghị kpamkpam iji mezue ntọala nke ngwaọrụ ohuru. Ọ bụrụ na ọ na-ukwuu tụrụ aro ka mepụta ndị a arụmọrụ na njikọ internetntanetị. Wayzọ a nhazi ngwaọrụ ga-ezu. N'ime listi netwọk Wi-Fi dịnụ, anyị ga-ahọrọ nke anyị. Iji gaa n’ihu, mgbe abanyechara koodu nnweta, anyị ga-ahọrọ «gaa n’ihu».
Ọ na-ejikarị iji otu netwọk Wi-Fi eme ihe kwa ụbọchị. Maka nke a, yana ị nwere ike itinye netwọk niile ịchọrọ, anyị na-akọwa esi mee ya n’oge ọ bụla ọzọ. Anyị na-enweta akara ngosi ahụ ọzọ «Ntọala» nke ngwaọrụ anyị ma họrọ nhọrọ «WiFi ". Ebe etinyere njikọ Wi-Fi anyị ga - enwe ike ịhụ na ndepụta ndepụta netwọkụ dị. Nanị anyị ga-ahọrọ netwọkụ achọrọ ma tinye koodu nnweta. Ngwaọrụ anyị ga-ejikọ na netwọkụ echekwara mgbe anyị nọ n'ime mkpuchi ya.
Otu esi abanye na akaụntụ Google anyị.
Anyị na-eche na anyị nwere akaụntụ Google ma ọ bụ na anyị kere ya na-eso ntuziaka ndị gara aga. Nweta ya ma nwee ike ịnụ ụtọ ọrụ niile nke akaụntụ anyị na-enye dị mfe. Naanị ihe anyị ga-eme bụ mee ka anyi mata anyi na akauntu anyi “xxx@gmail.com” ma tinye okwuntughe anyi. Ozugbo emere nke a, anyị ga-anarịrị ọnọdụ nke ọrụ iji gaa n'ihu na nzọụkwụ ọzọ.
O nwekwara ike ịga n'ihu na nhazi ahụ na-enweghị akaụntụ "gmail". Ma ọzọ anyị na-akwado ka gị na ya mee ya. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ nchịkọta nke ọrụ Google na-enye anyị. Yabụ na nhazi ahụ ga-ezu oke n 'ụzọ niile.
Etu esi tinye akaụntụ email ọzọ
Ozugbo usoro gara aga gwụchara, nchịkọta nhọrọ ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ itinye akaụntụ email ọzọ. Ebe a anyị nwere ike ịgbakwunye akaụntụ email ndị ọzọ anyị ji assiduously. Ma obu nke Google ma obu ndi oru ozo. Ngwa Gmail ga-elekọta ịhazi ha na folda. Nwere ike ịhụ ozi niile n'otu oge ma ọ bụ n'otu n'otu họrọ igbe mbata, eziga, wdg.
Dị ka ọ dị na netwọk Wi-Fi, ozugbo usoro nhazi ngwaọrụ ahụ gwụchara, anyị nwekwara ike ịgbakwunye ọtụtụ akaụntụ email dị ka anyị chọrọ. Maka nke a, anyị ga-aga akara ngosi ugboro ugboro nke «Ntọala» ebee ka anyị kwesịrị ile anya maka nhọrọ ahụ "Akaụntụ". Site ebe a anyị ga-ahọrọ "tinye Akaụntụ" anyị ga-abanye aha akaụntụ, paswọọdụ, wdg. Na ozugbo ọ ga-egosi na igbe mbata na ndị ọzọ.
Hazi nche na unkpọghe usoro na gam akporo
N'akụkụ a, nhọrọ nchekwa nke ngwaọrụ anyị nwere ike ịnye anyị ga-arụ ọrụ dị mkpa. Nke ahụ bụ, ọ dabere na uru metụtara ya ị nwere. Ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọhụrụ ọ bụla nwere akara mkpisiaka. Ọ bụ ezie na enwere ekwentị ndị na-etinyebeghị teknụzụ a, enwerekwa ndị nwere iris agụ o ihu ihu.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ anyị enweghị ozi ọ bụla na sistemụ nchekwa anyị ekwesịghị iche. Ọ nwere ike ịnwe nchebe na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ejiri ngwaọrụ Google nyere anyị nke ọma. Anyị nwere ike mgbe niile nwere Kpọghe ụkpụrụ ma ọ bụ mee ya site na a koodu ọnụọgụ. Na nke a, anyị nwere ike ịhọrọ naanị otu ma ọ bụ jikọta ha na ibe ha. N'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, anyị na-adụ ọdụ mgbe niile iji otu.
Nke a bụ usoro ikpeazụ na nhazi nke ngwaọrụ anyị, mana ọ bụghị nke kachasị mkpa maka nke ahụ. Ozugbo anyị ahọrọla usoro nchekwa, ama ama anyị adịla njikere. Ntọala ndị a na-abụkarị otu ihe niile gam akporo ngwaọrụ. Mana iwu nwere ike gbanwee dabere na akwa nhazi na ụdị nke sistemụ arụmọrụ anyị nwere.
Dabere na ọnọdụ anyị, anyị ga-ahọrọ mpaghara oge kwesịrị ekwesị. Si ebe ahụ anyị nwere ike ijide n'aka na oge egosipụtara site na ngwaọrụ ziri ezi.
Ugbu a ee, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ngwaọrụ ọhụrụ anyị na ikike zuru oke. Mana nke mbụ, anyị nwere ike inye gị ntakịrị mmetụ nke ịhazi onwe. Obi abụọ adịghị ya bụ otu n'ime njirimara nke sistemụ arụmọrụ a, enwere ike ịnye ya ọdịdị nke kachasị amasị anyị. Site na nhazi nke ngwaọrụ anyị nwere ike ịhọrọ isiokwu, ụdaolu ma ọ bụ ozi na anyị kacha amasị anyị. Dị nnọọ ka ya akwụkwọ ahụaja mkpọchi ma ọ bụ ojiji ihuenyo. Ma ọ bụ ọbụna agba nke ngosi LEDs jikọtara na ọkwa ọ bụla.
Etu esi amata ma sistemụ arụmọrụ m nke Android ọ dị ọhụrụ
Tụle ọtụtụ ngwa ndị arụnyere na Google na-enye anyị, Smartphone arụ ọrụ arụchaala maka ọrụ ọ bụla. Ma Tupu ịga n'ihu na ntinye nke ngwa ndị dị na mpụga, ọ na-atọ ụtọ ịlele na ngwanrọ anyị dị ọhụrụ. Iji mee nke a, n'ime menu ngwaọrụ anyị ga-aga "Ntọala". Anyị ga-ele anya maka nhọrọ ahụ "Banyere ngwaọrụ m" anyị ga-pịa ya. Ozugbo nhọrọ a meghere, anyị ga-ahọrọ "Chọọ maka mmelite" (ma ọ bụ nhọrọ yiri nke ahụ). Ekwentị n'onwe ya ga-elele ma ọ nwere mmelite ọ bụla echere itinye.
Ọ bụrụ na enwere mmelite na-echere, anyị ga-pịa "Download ma wụnye" ozugbo nbudata ga-amalite, nke a ga-arụnye na akpaghị aka. Usoro a nwere ike iwe nkeji obere ma ekwentị anyị ga-adị ọhụhụ. Rụba nke ahụ ama ị gaghị enwe ike ibudata mmelite na ihe na-erughị pasent iri ise.
Dị ka ndụmọdụ bara uru, ọ bụ adaba iji rụọ ọrụ a na njikọ wifi. Ebe ọ bụ na nbudata nke mmelite nke sistemụ arụmọrụ nwere ike ime ka data data anyị karịa.
Usoro ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Kwalite ngwaọrụ site na iji aka ya rụọ ọrụ yana ya na ngwa dị mma mgbe niile na ụdị kachasị dịnụ. Nara ihe ga-egbochi gị ịnwe nsogbu ndakọrịta ngwa, yana ọbụlagodi oriri batrị nwere ike ịbawanye mma.
Etu esi ebudata ngwa na gam akporo
Ugbu a ee. Smartphone anyị dị njikere ịnata ngwa. Anyị nwere ike ibudata ma wụnye ọtụtụ ngwa anyị chọrọ. Ndụmọdụ anyị bụ isi bụ ka anyị mee ya site na ụlọ ahịa gọọmentị, Playlọ Ahịa Google Play. N'ime ya anyị ga-achọta ihe ruru nde ngwa na ọrụ anyị maka ihe niile anyị nwere ike iche banyere. Naanị anyị ga-pịa akara ngosi Storelọ Ahịa Play nke na-abịa tupu arụnyere na ndabara ma anyị nwere ike ịnweta.
Were ya edemede nke anyị nwere ike ịchọta, ọmụmaatụ, ntụrụndụ, ibi ụdị ndụ, foto, agụmakwụkwọ, egwuregwu, na na ihe karịrị iri atọ nhọrọ. Anyị nwere ike ịhọrọ ịchọ n'etiti ndị kasị ewu ewu, ma ọ bụ chọọ egwuregwu, fim, egwu. Nhọrọ na-adịghị agwụ agwụ nke anyị ga-achọta ngwa anyị chọrọ.
Iji wụnye ngwa na ngwaọrụ anyị, ihe mbụ bụ iji nweta Storelọ Ahịa Play. Ozugbo n'ime, mgbe anyị chọtara ngwa achọrọ, ị dị nnọọ nwere pịa ya. Mgbe anyị meghere ya, anyị nwere ike ịhụ ozi metụtara ọdịnaya ya, lee nseta ihuenyo nke App n'onwe ya, ọbụnakwa gụọ nkọwa ma hụ ọkwa ndị ọrụ. Nakwa ịlele na ngwa ahụ bụ n'efu ma ọ bụ kwụọ ụgwọ.
Etu esi etinye ma ọ bụ wepu ngwa na gam akporo
Ọ bụrụ na i kwere anyị, dị anyị nwere pịa "wụnye". Ngwa a ga - amalite ibudata ma wụnye na ngwa anyị. Ma ozugbo nwụnye ahụ agwụla, ngwa ahụ ga-emepụta akara ngosi ọhụrụ na desktọọpụ. Imepe ya ma jiri ya, naanị ị pịa pịa akara ngosi ya. See hụrụ ka ọ dị mfe? Ọ gaghị adị mfe ibudata ma wụnye ngwa.
Ma, Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị m mmasị na ngwa ahụ ebudatara? Enweghị nsogbu, anyị nwekwara ike iwepụ ha dị mfe. Otu nhọrọ ga-abụ ịga "Ntọala". Site ebe a ka anyị họrọ "Ngwa" anyị ga-ahụ ndepụta nke ngwa arụnyere. Site na ịpị na ngwa anyị chọrọ iwepụ, menu gosipụtara nke anyị ga-ahọrọ "Wepu". Ma ọ bụ, dabere na ụdị gam akporo anyị jiri, site na ịpị na ijide ngwa ọ bụla, obe gosipụtara na nke ọ bụla n'ime ha. Na ịpị obe, a ga-ewepụkwa ngwa ahụ.
Mkpa ngwa ọdịnala na android
N'ihi ọtụtụ nhọrọ Play Store na-enye anyị, ekwentị ọ bụla dị iche na nke ọzọ. Ngwaọrụ gị na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara gị. Site n’ilele ngwa nile anyi rụnyere anyi nwere ike mata ihe masiri anyi na ihe anyi choro. Egwuregwu, egwuregwu, egwu, foto. Enwere ọtụtụ nhọrọ anyị nwere ike ibudata na ọ na-esiri ike ịme nhọrọ nke ga-emeju onye ọ bụla.
Mana n'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike ikwenye ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na usoro nke ngwa "isi"”. Anyị ga-enye gị ndụmọdụ ndị akwadoro maka anyị. N'ime ha anyị ahọrọla ndị kachasị ewu ewu na mpaghara ọ bụla. Ebe ha wụnye ị ga-enwe ike iji nweta ọtụtụ ihe ọhụrụ gị gam akporo ekwentị.
Ngwa nke netwọkụ mmekọrịta bụ "abc" nke ngwa ebudatara maka smartphones. Ha dị n'elu sistemụ arụmọrụ, ụdị na ụdị. Yabụ anyị enweghị ike ileghara ngwa ndị ahụ jiri ọtụtụ awa eji anya. Smartphones fọrọ nke nta ka a ghara iche n'echiche n'enweghị ngwa ndị a. Ha na-ebi maka ibe ha na Anglịkan.
Lere anya dị ka na netwọk nke netwọk, Anyị nwere ike ịgwa gị ntakịrị ihe a na-amaghị maka netwọkụ mmekọrịta a. Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị kpebie ịgbanwe gaa na Smartphone ma ị nweghị akaụntụ Facebook, nke a bụ oge.
Ọzọ nke dị mkpa mmadụ netwọk na-ekwurịta okwu na ụwa. Ebupụtara ya dị ka ọrụ microblogging. Ma gbanwee ekele maka iji ya, ma n'ezie ndị ọrụ ya ezigbo ngwá ọrụ nkwukọrịta. Ndị mmadụ, ndị isi, ndị ọkachamara na ndị na-amu amu na-agbakọta kpamkpam na mmanya nke ozi na echiche anyị na-agaghị eleghara anya.
Netwọk mmekọrịta maka ndị hụrụ foto n'anyaka. Ma ọ bụ nke a bụ otú o si bịa na smartphones anyị maka oge mbụ. Ugbu a ghọrọ ka a ike ikpo okwu nke iji chọpụta ndị mmadụ, foto, akụkọ na ọbụlagodi ụlọ ọrụ nwere mmasị. Instagram enweghi ike ihapu na Smartphone ohuru.
Nkwurịta okwu bụ ihe mgbaru ọsọ mbụ nke ekwentịma ọ bụ, ma smart ma ọ bụghị. Dị ka anyị makwaara, usoro nkwukọrịta anyị ugbu a agbanweela. O siri ike na a ga-akpọ oku ekwentị ọzọ. Site na iji Smartphone gam akporo na aka gị, ọ dị oke mkpa ịwụnye opekata mpe abụọ n'ime ha.
Es ụwa kacha ebudatara ma jiri ngwa izi ozi ụwa. Onye na-ejighi WhatsApp taa? E nwere ụfọdụ ụlọ ọrụ na-etinye ngwa a, n'etiti nke anyị na-ahụ tupu arụnyere ya. Otu ngwa dị mkpa iji dịrị n'ụwa
Were ya dika "nke ozo" nke otutu. Ma họọrọ karịa WhatsApp na atụnyere na-enweghị atụ. Isi ya dikwa ka nke onye ya na ya na-agha. Ma na a na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na mmelite yana site na itinye n'ọrụ dị iche iche ejisie ike ịdị na-arụ ọrụ nke ọma karịa WhatsApp.
Ngwa bara uru maka ama gị
Ngwa ndị ahụ e kwuru n’elu bụ ndị ị ga - ahụ n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ smartphones niile na - arụ ọrụ taa. Mana na Google Play Store enwere ohere maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ma e nwere ngwa ndị nwere ike ijere gị ozi maka naanị ihe ị chọrọ. Ngwa ndị ịrụ ụka adịghị ha ga-enye gị ama otu isi ihe bara uru na arụmọrụ.
Ya mere, n'okpuru anyị ga-akwado ụfọdụ n'ime ngwa ndị kachasị amasị anyị na nke anyị na-eji kwa ụbọchị. Nye ọtụtụ ndị, smartphones bụ ụdị ọzọ nke nkwukọrịta na ntụrụndụ. Ma maka ọtụtụ ndị ọzọ ọ bụkwa ọrụ ọrụ bara uru nke nwere ike inyere anyị aka nke ukwuu.
Ebe iji debe ya niileNke a bụ otu ngwa si akọwapụta onwe ya nke nwere ike inyere gị aka ịhazi onwe gị nke ọma. Tụtara ya dịka akwụkwọ edetu mana nke ahụ na-arụ ọrụ karịa. Nwere ike ichekwa foto, faịlị, audios, ma ọ bụ ederede ederede. Ọ na-echetara gị maka nhọpụta ma ọ bụ ọrụ aga-eme. Otu n'ime ngwa ngwa zuru ezu maka ọfịs ma ọ bụ maka ihe gị yana nke ahụ amalitego oge.
Ihe dị ọhụụ ma baa uru gbasara ngwa a bụ nke ahụ i nwere ike iji ya na ihe ọ bụla nke ngwaọrụ gị. You ga-emekọrịta ha mgbe niile. Yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka ịchọ ihe ederede na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị. Ihe ị dere na Evernote ga-adị na ngwaọrụ niile ị na-eji. Otu n'ime ngwa kachasị baa uru ị ga-ahụ.
Evernote - Nhazi ihe nhazi & nhazi ụbọchị
Developer: Notelọ ọrụ Evernote
Ndị ọzọ nnukwu ngwá ọrụ maka ịhazi ọrụ. Ezigbo ịrụ ọrụ otu ọrụ. Mepụta mbadamba ma kesaa ya na onye ọ bụla ịchọrọ ịmekọrịta. Ị nwere ike mepụta ndepụta na ogidi ezigbo visual. Na jupụta na kaadị, dịka ọmụmaatụ, site na to-dos. Kaadị ndị a nwere ike ịdọrọ site na kọlụm gaa na kọlụm dị mfe, dịka ọmụmaatụ site na to-dos iji rụchaa ọrụ.
Ọ bụrụ n’ịkekọrịta otu ọfịs ma ọ bụ ọrụ na otu, anyị enweghị ike iche maka ụzọ bara uru ma baa uru iji hazie onwe gị. Soro ndị ọrụ ibe gị kesaa bọọdụ gị. A) Eeh onye ọ bụla ga-enwe ike ịnweta ozi emelitere na-echere na ịrụcha ọrụ. Ngwa ngwa akwadoro.
Trello: Hazie onye ọ bụla, ebe ọ bụla!
Otu n'ime ngwa nke na - enweta mmeri n'etiti anyị mgbe niile. Na ụkpụrụ nduzi nke "Zọpụta maka oge ọzọ", na-enyere anyị aka ịghara ịhapụ ihe ọ bụla pụrụ ịmasị anyị. Tinye ya n’ime “n’akpa” gị ma gụọ ya mgbe inwere oge. Nwere ike ịchekwaa akụkọ na akụkọ na-enweghị njedebe. You nwedịrị ike ịnye ha iwu dịka ọ kachasị gị mma. Obi abụọ adịghị ya na ngwá ọrụ e mere maka ndị nke anyị na-anaghị akwụsị. Ma nke ahụ bara ezigbo uru ịghara ịhapụ isiokwu ọ bụla dị mkpa maka anyị. ihe na-amasị anyị n'ezie.
N'akpa bara uru dị ka ọ dị mfe iji. Chekwa mbipụta na akpa gị bụ ngwa ma dịkwa mfe. Mgbe echichi tinye n'akpa uwe gụnyere ndọtị na akara ngosi ya. Iji nhọrọ oke anyị nwere ike ịchekwa na akpaaka na akpaghị aka. Naanị anyị ga-enweta ngwa ahụ iji chọọ ihe niile anyị chọrọ ịchekwa maka oge ọzọ. Nnukwu echiche nke nwere ike inyere anyị ezigbo aka.
N'akpa uwe: Chekwaa. Gụọ. Too.
Developer: Mozlọ ọrụ Mozilla
Emere ngwa a na echiche yiri Pocket. Ọ bụ ezie na ọ gụnyere ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ. Ofwa nke pọdkastị nweta onu ogugu karia nke udiri udiri a. Ọchị, ntụrụndụ, omenala ma ọ bụ mmemme egwu. Ihe niile dabara na iVoox. A nnukwu na nke ọma haziri ahazi ikpo okwu ebe ị nwere ike ige ntị na usoro redio kachasị amasị gị mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ige ntị na redio na-amasị gị kachasị, ohere ọ ga-abụ na ọ dị na iVoox. Can nwere ike ịdenye aha na akwụkwọ dị iche iche. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ama mgbe enwere ọdịnaya ọhụụ metụtara ihe masịrị gị yana mmemme gị. Ọ bụghị ihe niile ga-abụ maka ọrụ, nri? Onye mmekorita zuru oke maka oge ezumike gi.
Podcast & Radio iVoox - Audio na - enweghị oke
Developer: iVoox Podcast y Redio
Anyị nwere ike ịdụ gị ọdụ na ngwa na-enweghị nkwụsị ogologo oge. Ndị a bụ ụfọdụ n’ime ndị anyị ji eme ihe nke kachasị were na anyị weere na ha bara uru. Mana dịka onye ọrụ ọ bụla bụ ụwa. Ndụmọdụ kachasị mma bụ ịmaba n'ime Storelọ Ahịa Play ma chọta "akụ" gị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ngwa maka ihe echekwara na ọ bụ n’ụlọ ahịa ngwa Google.
Gam akporo nche
Ọ dịghị njọ ịgụ ma nụ nke ahụ Android abụghị nchekwa sistemụ arụmọrụ. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị otu narị percent. Na akụkụ ya ọ bụ eziokwu. Ihe, n'aka nke ọzọ, ịbụ usoro kachasị eji eme ihe n'ụwa niile, ọ bụ ihe ziri ezi na ọ bụ malware na-awakpo ya. Iji mee ka ngwaọrụ anyị dị nchebe enwere usoro nke ngwa na antivirus anyị nwere nke anyị ga-ejikwa "nhicha" nke ekwentị anyị.
I gha iburu n'uche na nche nke anyị ngwaọrụ na-adabere a ukwuu na ihe ize ndụ nke anyị na-ekpughe ha. Tonweta weebụsaịtị yana aha njirimara. Mepee ozi ịntanetị na-enyo enyo. Ma ọ bụ ọbụna nbudata ụfọdụ dị ala, ngwa ad-ridden. Dịka anyị pụrụ ịhụ, enwere ụdị ọrịa dị iche iche. Ọ dabara nke ọma, gam akporo na-arụ ọrụ iji meziwanye nchebe. Ọ na-eme nlele siri ike na ngwa egwu dị egwu site na igbochi ha na Storelọ Ahịa Play.
Dị ka onye ọrụ na-arụsi ọrụ ike nke gam akporo kemgbe mmalite ya, ekwesịrị m ịsị na enwetụbeghị m nnukwu nsogbu n'ihi ọrịa nje na ekwentị m. Ma ọ bụ eziokwu, dị ka ọ na-eme na kọmputa, na nyocha nke faịlụ mgbe niile na ngwaọrụ nke na-eme mmemme ma ọ bụ ngwa, na-akwụsịlata ọrụ ya. Ya mere, iji zere nsogbu na nje na-enweghị adịkwa a bit nke arụmọrụ, anyị ga-ewere ụfọdụ anya na ọdịnaya anyị na-a consụ na ebe o si abịa.
Mana ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ihi ụra n'udo ịmara na ebe ọ bụla ị ga-enweta okwuntughe na data gị ga-adị mma, ọ ka mma na ị wụnye ngwa antivirus. Akwa nhọrọ nwere ike ịbụ 360 Security, A na-ahụta Sọftụwia Nchekwa Ekwentị Kwesịrị Ekwesị nke uwa. Ọ bụghị n’efu ka o nwere ihe edeturu 4,6 n’ime ise na Storelọ Ahịa Play. Na mgbakwunye inwe ihe karịrị narị nde abụọ na nbudata.
Nchekwa nchekwa - Antivirus, Booster, Cleaner ekwentị
Developer: Mepụta Nchebe Nchedo
Esi ndabere data m na gam akporo
Dị ka iwu zuru oke, ekwentị anyị nwere ozi bara uru maka anyị. Mgbe ụfọdụ n'ụdị ozi, ma ọ bụ foto na vidiyo. Ma ọ bụ ọbụna akwụkwọ ọrụ anyị ekwesịghị ida. Yabụ na data anyị niile dị mma ọghọm, ma ọ bụ nnweta ndị ọzọ, ọ kachasị mma iji ngwaọrụ Google nyere anyị.
Ekele diri Ndi ana-akpo Google, Foto Google ma obu Google Drive, anyị nwere ike ịnweta kọntaktị anyị, foto, faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ n'enweghị nsogbu na ebe ọ bụla. Mana ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịmepụta nkwado ndabere na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, anyị ga-agwa gị otu esi eme ya. Iji mee ka ndabere ndabere anyị ga-emeghe nhọrọ «Ntọala». Anyị na-aga na ntọala dị elu ma chọọ "Nkeonwe". Otu n'ime ntọala bụ "Ndabere".
N'ime nhọrọ a, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ dị. Anyị nwere ike i copyomi data anyị na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya ma ọ bụ mee ya site na akaụntụ Google anyị. Maka nke a, anyị ga-amata na ama nwere akaụntụ nke anyị. Site na ebe a anyị nwekwara ike weghachite ntọala netwọk, n'ihe banyere mgbanwe nke ndị ọrụ, dịka ọmụmaatụ. Anyị nwekwara ike weghachite data ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ihichapụ ngwaọrụ anyị kpamkpam.
Nzọụkwụ niile gara aga nke anyị kọwara ga-aba ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na ngwaọrụ gam akporo. Ha ga-abụkwa na ị nọ n'ihu mbido gị na teknụzụ ekwentị. Anyi anwala ime ndu zuru oke ka ighara ida uzo n’oge obula. Ma O nwere ike ịbụ na ị bụghị onye ọhụụ na ụwa Smartphone. Ee ee ị nọ na gam akporo.
Yabụ iji mee ka ntuziaka a dị ọtụtụ, anyị ga-etinye otu nzọụkwụ. Nke a bụ otu anyị ga - esi mee ọrụ nnabata a maka ndị niile chọrọ isonye na sistemụ arụmọrụ nke ụwa. Ndị ọrụ ọhụụ na ndị sitere na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ. Na na mgbanwe site na sistemụ arụmọrụ gaa na nke ọzọ anaghị eweta nsogbu ọ bụla.
Etu esi ebufee data m na gam akporo site na iPhone
Site na Google ha na-eburu n'uche mbugharị na gam akporo nke ndị ọrụ sitere na iPhone. Ruo ọtụtụ afọ, ọ na-emepe ngwa ndị na-akwado ọrụ nke ịkwaga data site na otu ikpo okwu gaa na nke ọzọ. Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ usoro ahụ nwere ike ịdị ka ihe na-agwụ ike na mgbagwoju anya. Google na-enye ụfọdụ ngwaọrụ ndị ga-eme ka mgbanwe a dị mfe site na gam akporo na data iOS
Google Drive maka iOS
Otu ngwa bara uru nke Google na-enye n'efu site na ngwa ntinye aka nke ngwa apụl. Na ngwa a anyị nwere ike ibupụ ọdịnaya niile anyị weere na ọ dị mkpa site na iPhone ochie iji nweta ya na gam akporo ohuru anyi. Anyị nwere ike ime ya site na ịgbaso usoro ole na ole.
Arụnyere na iPhone, na mgbakwunye na inwe ike iji ya dị ka ngwá ọrụ ọ bụ, maka ịchekwa na nhazi faịlụ na akwụkwọ. O nwekwara ike ịbụ anyị nnọọ uru maka ịnyefe data anyị na iOS na gam akporo. Ya mere, ihe mbu anyi gha eme bu ibudata ngwa a. Na ozugbo awụnyere na iPhone, jiri akaụntụ Google were mata onwe anyị n’ime ya. A ga-edepụ data site na akaụntụ a.
Site na Google Drive maka iOS arụnyere na iPhone, anyị ga-emerịrị ihe ndị a. Site na ntọala menu anyị ga-ahọrọ "Mee nkwado ndabere". Anyị kwesịrị họrọ ka data depụtaghachiri na akaụntụ Google Drive anyị nke anyi choputara na mbu. Ozugbo emere nke a, anyị ga - ahọrọ faịlụ dị iche iche anyị chọrọ idetuo dịka kọntaktị, foto, mmemme kalenda, na mkparịta ụka WhatsApp. Mfe, nri?
Mgbe anyị mepere otu ngwa ahụ na ngwaọrụ gam akporo anyị, tinye nke mbụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị nwere ike ịnweta data niile depụtaghachiri. Site na WhatsApp, mgbe anyị wụnye ya, anyị ga-ahọrọ mweghachi site na oyiri na Google Drive iji nwee nkata ndị echekwara. Anyị ga-eme otu ihe ahụ iji nwetaghachi kọntaktị, kalenda, wdg.
Foto Google maka iOS
Dịka mmachi na Google Drive anyị nwere ike ịchọpụta na nchekwa ọ na-enye anyị ezughi oke. Dị ka iwu zuru oke, pasent kachasị elu nke ebe nchekwa nke Smartphone kwekọrọ na foto. Ma ọ bụ ihe ndị a na-eme ka ebe nchekwa ahụ dịrị.
N'otu ụzọ ahụ anyị nwere na Applọ Ahịa Apple site na Google Drive, na nso nso a anyị nwere ike ibudata Foto Google. Site na 15 GB nke a na-apụghị ichepụta echekwa enwere n'efu, anyị nwere ike belata ọrụ nchekwa nke ngwaọrụ anyị. N'otu ụzọ ahụ, nwere anyị niile foto na vidiyo n'otu ntabi na ọhụrụ anyị gam akporo Smartphone.
Ọ bụ ezie na mgbe niile anyị na-akwado ndị obodo Google ngwa mbụ maka nhazi ya na arụmọrụ gosipụtara. Anyị nwekwara ike ịkwado ụfọdụ ngwa dị mkpa anyị nwere ike ịchọta n'efu na Playlọ Ahịa Google. Ọ bụrụ na i dobeghị anya ma iji usoro ndị a ịgbaso, enwere ngwa dị mfe ma na-enweghị ngwụcha.
Bugharịa Ndi ana-akpo Nyefee / Ndabere
Ọ bụrụ na ị na-ebufe kọntaktị site na iPhone ochie gị gaa na ama ọhụụ gam akporo gị bụ nsogbu, kwụsị ichegbu onwe gị. Ka ọ were mmalite gị gam akporo anaghị amalite na ụkwụ na-ezighi ezi Anyị ahọrọla ngwa na mgbe ị jiri ya, ị gaghị ala azụ ịkwado. N'ihe na-erughị otu nkeji ị ga-ahụ otu kọntaktị gị si na otu ngwaọrụ gaa na ngwaọrụ ọzọ na-enweghị mgbagwoju anya.
Ma ị sitere na iOS ma ọ bụ ọ bụrụ na ị megharịa ngwaọrụ ma chọọ ịghachite akwụkwọ ịkpọtụrụ gị nke a bụ ezigbo ngwa. Ntughari emelitere na nso nso a na akara 4,8 na Storelọ Ahịa Play butere ya. Na Ahụmahụ nke iji ya ọtụtụ ugboro na-akwado arụmọrụ ya dị oke mma.
Anyị ga-eme ibudata App na iPhone yana kwa na ngwaọrụ ohuru. Anyị na-enweta site na akara ngosi ya na ekwentị abụọ n'otu oge. N’iburu n’uche na anyị aghaghị mee ka Bluetooth rụọ ọrụ. Ọhụrụ anyị ekwentị anyị ga-ahọrọ nhọrọ «mbubata kọntaktị site na ngwaọrụ ọzọ». Ngwa ahụ n'onwe ya ga-esochi ngwaọrụ Bluetooth dị nso. Mgbe anyị hụrụ aha nke ochie ngwaọrụ na ihuenyo, anyị dị nwere iji họrọ ya site na ịpị akara ngosi na-egosi na aha ya.
Anyị ga-ahọrọ, n'okwu a, iPhone site na nke anyị chọrọ mbubata kọntaktị. Dị mkpa nye ikikere ngwa ahụ dị mkpa ka ị nwee ike ịnweta data kalenda. Ozugbo anyị mere nke a, Akwụkwọ ndekọ aha ga-amalite idetuo site na ngwaọrụ ochie na nke ọhụrụ. Ọ fọdụrụ naanị iji nye ikikere na ngwaọrụ ọhụrụ ka ịchọta data batara na akwụkwọ ịkpọtụrụ. Na ozugbo anyị nwere ike ịnụ ụtọ kọntaktị anyị niile na ekwentị ọhụrụ. Nke ahụ dị mfe.
Ugbu a, anyị enweghị ike iji ihe mgbakwasị ụkwụ na anyị anaghị agbanwe sistemụ arụmọrụ n'ihi nsogbu nke ịfefe data anyị site na otu ikpo okwu gaa na nke ọzọ. Ekele maka ngwa ndị a, anyị ga-enwe ike ịnweta faịlụ anyị niile, foto na kọntaktị anyị site na usoro dị mfe.
Are dị njikere ugbu a imikpu onwe gị na ụwa gam akporo
Taa Anyị akọwachaala nke ọma otu esi abanye na Google mobile ecosystem. Site na oge a gam akporo nwere ike ịbụ akụkụ nke ndụ gị. Kwadoro nke ọma, a Smartphone-aghọ ndị bara uru "ndọtị" nke onwe anyị. Kama ịbụ ihe mgbochi na mmekọrịta onwe anyị, site n'iji ya eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ nwere ike inyere anyị aka n'ọtụtụ ụzọ.
Ọ bụrụ na ị na-ala azụ site na mbido ikpebi n'etiti iOS ma ọ bụ gam akporo na-agwa gị na ka oge na-aga, na ndị ọzọ na ndị ọzọ, sistemụ arụmọrụ na-adịkarị ka ibe ha. Na ụkpụrụ anyị nwere ike ikwu na ha abụọ na-eje ozi otu ihe, na ha na-arụkwa otu echiche. Ha abụọ na-akwado ụlọ ahịa ngwa ngwa nke mejupụtara ọrụ ndị bụ isi ha na-enye.
Gam akporo a na-ejikwa ike pụọ na ndị ọzọ bụ n'ihi ọnọdụ ụfọdụ dị mkpa. Sistemụ nrụọrụ nwere emeghe uche n'akụkụ niile. Ngwanrọ ngwanrọ ya bụ otu n'ime akụ kachasị mma ya. Tonweta mmepe ngwa na-enweghị mkpa maka ikikere dị oke ọnụ. Na ohere nke inwe ọtụtụ nhazi na ohere ịhazi onwe. Echere, a gaghị enwe ihe ọ bụla ị ga-echefu na gam akporo site na sistemụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị bụghị onye mbido, ịnwere ike ịchọta ntuziaka a dị oke mkpa. Ọ bụ ezie na nke a bụ ezigbo njedebe nke okike ya. Nyere ndị, n'ihi ọnọdụ, enwebeghị ike ma ọ bụ chọrọ ruo ugbu a ịnweta teknụzụ ekwentị ọhụụ. Nduzi anyị abaarala gị uru? Anyị nwere olile anya na anyị enyerela gị aka ịme igwe ọhụụ ọhụụ ka arụ ọrụ dị ka o kwere mee. Naanị ihe ga - eme bụ ịnụ ụtọ ahụmịhe gam akporo, jisie ike!
Ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla ma ọ bụ enwere ihe ị na-amaghị etu esi eme, hapụ anyị a comment na anyị ga-enyere gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Ntuziaka gam akporo, ndu ndu maka ndị mbido
N'ime akwụkwọ ntuziaka zuru oke ruo taa! Ukwuu na-atụ aro!
Ezigbo ederede. A na-ewerekarị ya dị ka ihe siri ike na mmadụ niile doro anya n'echiche ụfọdụ
Akwa post !! Ha kwesịrị ịgụnye ya na ngwugwu mgbe ịzụrụ ekwentị ọhụrụ ka ijide ihe niile.
Ezigbo onyinye. Daalụ nke ukwuu
Ọ bụ akwụkwọ ntuziaka zuru oke zuru oke, nke doro anya, dị nkenke ma dị irè nke m hụla taa.
Ọ dị iche na enweghị ihere nke akwụkwọ ntuziaka (nke ejiri obere broshuọ dochie ya) n'ọtụtụ ekwentị ọhụụ kacha ọhụrụ. Ekwesịrị igbochi ya ma taa ya ahụhụ.
Site n'ụzọ, dị ka ihe atụ nke enweghi akwụkwọ ntuziaka na ọdụ ANDROID:
Etu esi ekpuchido nọmba m mgbe m kpọrọ XIAMI MI A2 na A1 m gam akporo 8.1?
Achọrọ m nke ukwuu n'ihi na enweghị m ike ịchọta ya na nhazi ma ọ bụ na NT -GH manual akwụkwọ ntuziaka na ọ bụghị mmejọ nke onye ọrụ, onye m kpọrọlarị.
Daalụ n'ọdịnihu maka inyere m aka
Ndị a bụ onyinye Amazon na Smartphones maka taa
Top 10 ekwentị nke 2017